I-BEE: Yakha kwaye ukhuphele i-imeyile yakho ephendulayo kwi-Intanethi simahla | Martech Zone
NgoMvulo, Matshi 8, 2021 NgoLwesithathu, ngoFebruwari 9, 2022 Douglas Karr
Ngaphezulu kwe-60% yazo zonke ii-imeyile zivuliwe kwifowuni ngoku ka Qha ga mshelwano. Kuyamangalisa ukuba ezinye iinkampani zisasokola ngokwakha ii-imeyile eziphendulayo. Kukho imiceli mngeni emi-3 nge-imeyile ephendulayo:
Umboneleli ngeNkonzo ye-imeyile -Abanikezeli abaninzi be-imeyile abakabi nayo kwaye bayilahle amandla okwakha i-imeyile, ke ifuna itoni yophuhliso kwinxalenye yearhente yakho okanye iqela langaphakathi lophuhliso ukwakha ezo templates.
Abaxhasi be-imeyile -Angabo bonke abathengi be-imeyile abafanayo kwaye uninzi lwazo lubonelela nge-imeyile eyahlukileyo kwabanye. Ngenxa yoko, ukuvavanywa kubathengi be-imeyile kunye nezixhobo lushishino ngaphakathi ngokwalo.
uphuhliso -Ukuba uyazi i-HTML kunye ne-CSS, ungakha iphepha lewebhu eliphendulayo ngokulula… Ifuna ukusebenza nabaphuhlisi abakhulu, okanye ukusebenza kunye neetemplate ezivavanyiweyo kunye nezilungisiweyo.
Ngoku kukho iindawo ezininzi kwi-Intanethi apho unokufumana kunye nokukhuphela iitemplate zasimahla ze-imeyile eziphendula ngokupheleleyo. Ukuba ulungile kuphuhliso, unokutshintsha izinto kwaye uzenzele i-imeyile entle. Ukuhlela ikhowudi eluhlaza ngasemva kwe-imeyile akukonwabisi, nangona… ulibale isitayile okanye iklasi kwaye i-imeyile yakho iya kujongeka imbi.
Kudala ndifuna ukuyilungisa le ncwadana Martech Zone okwethutyana ngoku kwaye sineenkonzo zethu ze-imeyile ezisebenza kwiserver yethu ezixabisa iipeni kwidola ngokuthelekiswa nabanye ababoneleli. Ngababhalisi abangaphezu kwama-30,000, andikwazi nje ukuthethelela iindleko zabanikezeli beenkonzo ze-imeyile ngenxa yoko sizakhele ezethu!
I-BEE yoMakhi we-imeyile oPhendulayo
Njengoko ndijonga ezinye iitemplate ezijikeleze iwebhu endizithandayo, ndenzekile kuyo yonke i-BEE, inkampani ephuhlise izixhobo ezimbalwa ezintle:
Iplagi ye-BEE -Umhleli wephepha le-imeyile olungisiweyo lweenkampani ze-SaaS ukuba zibandakanye kumaqonga abo.
I-BEE Pro -Ukuyilwa kwe-imeyile yokuhamba komsebenzi kwabaqulunqi be-imeyile abaziingcali ukuze basebenzisane kunye nokuphuhlisa.
UKUHALA -Umakhi we-imeyile omangalisayo oshukumayo oshukumayo onokuthi uvelise itemplate ukusuka ekuqaleni okanye ungenise kuwo nawuphi na omnye wamakhulu eetemplate zasimahla ze-imeyile.
Jonga i-imeyile ye-BEE kunye noMakhi wekhasi lokufika
Kwisithuba nje seyure, ndakwazi ukwakha i-imeyile yam, ndayifaka kwizixhobo eziphathwayo, ndizithumela kuvavanyo, kwaye ndikhuphele ikhowudi… konke simahla!
Kuqala, ndikhethe itemplate engenanto emva koko ndazakhela amacandelo endiwafunayo ndaza ndasebenzisa imifanekiso yokubamba. Ndizakukhowuda oku kwi Martech ZoneItemplate xa sele kanye ndiyifunayo.
Ndijonge kuqala i-imeyile yedesktop kwaye ndenza uhlengahlengiso oluncinci kwisithuba kunye nokupakisha.
Ndijonge kwangaphambili kwiFowuni kwaye ndenza utshintsho olongezelelekileyo. Umhleli unika ithuba lokufihla izinto ezikwidesktop okanye iselfowuni, ukuze ukwazi ukuzenzela ngokwenyani amava eselfowuni.
Ndathumela i-imeyile ngqo kuMhleli we-BEE:
Umhleli ukwenza ukuba ube nemvelaphi ebonakalayo ebonakalayo ekhangeleka intle ukuba uyayisebenzisa Indlela emnyama kwi-imeyile yakho umthengi.
Nje ukuba yonke into igqibelele, ndakwazi ukukhuphela ifayile epheleleyo ye-HTML kunye nayo nayiphi na imifanekiso yasentlalweni ebibandakanyiwe nonxibelelwano lwabo. Banokhetho oluninzi ngeli xesha, nangona kunjalo, ukuba ubhalisela iakhawunti ye-BEE Pro ehlawulelweyo.
I-BEE ijonge incwadana yeendaba ehlaziyiweyo evela Martech Zone!
Qalisa ukwakha i-imeyile yakho ephendulayo nge-BEE
tags: bee umhleli emailIplagi yenyosiinyosi proUmhleli we-imeyileUmhleli we-imeyile yasimahlaumhleli we-imeyile okwi-intanethiUmhleli we-imeyile ophendulayo